तनाव हटाउने उपाय | Nepalibiz.com.np ( nepali online directory and news portal site )
तनाव शरीरको त्यो स्थिति हो, जब हाम्रो जीवनमा अचानक कुनै परिवर्तन हुन्छ, जसबाट हाम्रो शरीरमा भावनात्मक र शारीरिक प्रतिक्रिया हुन्छ । आजको समयमा हरेक व्यक्ति आफ्नो सफलताको तयारी गरिरहेको हुन्छ । एउटा विद्यार्थी परीक्षामा अझ राम्रो गर्न चाहान्छ भने एउटा बिजनेसमेन अझ बढी मुनाफा कमाउन चाहान्छ । हामी सबै जना अझ उत्कृष्ट जीवनका लागि प्रयासरत हुन्छौ । यस्तो अवस्थामा हामीमा तनाव उत्पन्न हुन थाल्छ । हामीलाई लाग्ने थुप्रै रोगहरुको एउटा कारण तनाव पनि हो ।
१. निन्द्रा नलाग्नु
२. पाचन क्रिया सुस्त हुनु
३. रक्तसंचार दुरुस्त नरहनु
४. तौल घट्नु
५. मुटुको धड्कन बढ्नु
६. रक्तचाप बढ्नु
७. थकित हुनु
८. उदास हुनु
९. सास बढ्नु आदि ।
१. प्रेमपूर्ण सम्बन्धमा समस्या देखा पर्नु
२. वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुनु ।
३. कुनै काम पुरा गर्न समयको अभाव हुनु ।
४. कुनै गम्भीर रोग लाग्नु ।
५. आर्थिक समस्या
७. आफन्तको मृत्यु हुनाले
९. सपना पुरा नहुदा
१०. परीक्षामा फेल हुनु
११. जीवनमा सन्तुष्ट नहुनु आदि ।
उचित दिनचर्या ः जसरी समयमा सुत्नु जरुरी छ, त्यसै गरी बिहान समयमै उठ्नु पनि उतिकै आवश्यक हुन्छ । उठे पछि व्यायामका साथै पौष्टिक नाश्ता आदिको सेवन गरी उचित दिनचर्या अपनाउनु पर्छ ।
समय प्रबंधन ः आजको व्यस्त जीवनमा गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छ र समय कम हुन्छ । त्यसैले आफूले दिनभरीमा पुरा गर्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरूको सुची बनाउनुहोस् र प्राथमिकताको आधारमा एक एक गर्दै पुरा गर्नुहोस् । आफूले गर्नै पर्ने काम भोलिका लागि नछोड्नुहोस् । नत्र यही नै तनावको कारण बन्न पुग्छ ।
सकारात्मक सोच आवश्यक ः जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सोच सकारात्मक राख्नुहोस् । नकारात्मक सोच भयो भने कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन र तनाव हुन पुग्छ ।
आफ्नो लागि समय निकाल्नुहोस् ः जीवन जिउने क्रममा कामहरू गर्नु जरुरी हुन्छ तर आफ्नो लागि पनि समय निकाल्नुपर्छ । एकनासको कामले जीवन निरश बन्न पुग्छ । यस्तो निरशता तोड्न व्यस्त भएता पनि बेला बेलामा मौजमस्तीका लागि समय निकाल्नु पर्छ ।
आफन्तहरु सँग समय बिताउनुहोस् ः आफन्तहरुसँग सुख दुःखका कुराहरू गर्दा पनि तनाव कम हुन्छ । त्यसैले बेला बेलामा आफन्तहरु कहाँ जाने भेटघाट गर्ने गर्नुपर्छ । यसबाट तनाव त कम हुन्छ नै परस्पर स्नेह र माया पनि बढेर जान्छ ।
अरूको मद्धत गर्नुहोस् ः अरूको मद्धत गर्नु एउटा बहुमुल्य गुण हो , जसले तपाईँलाई विशेष बनाउनेछ । यदि तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ र कुनै गरिब तथा खाँचो परेको व्यक्तिलाई मद्धत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको तनाव केही हद सम्म कम हुनेछ ।
मद्यपान नगर्नुहोस् ः प्रायः मानिसहरू तनाव हुँदा रक्सी सेवन गर्ने गर्छन् । मदिरापान, रक्सी सुर्तीको सेवनले सोच्ने क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । जसबाट हाम्रो तनाव कम हुनुको सट्टा झन् बढ्छ । त्यसैले यस्ता कुराहरु बाट टाढा रहनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
एक समयमा एउटा काम गर्नुुहोस् ः कहिले काही हामीले गर्नु पर्ने काम धेरै हुन्छ र समय कम हुन्छ । यस्तो बेलामा हाम्रो दिमागले एउटा कुराको बारेमा मात्र नसोची चारै तिर सोचीरहेको हुन्छ र हामी तनावमा आउने गर्छौ । त्यसैले एक पटकमा एउटा मात्र काममा ध्यान दिई तनाव कम गर्न सकिन्छ ।
खानपानमा ध्यान दिनुहोस् ः स्वस्थ रहन पौष्टिक खानेकुराको आवश्यकता हुन्छ । जब हामी पौष्टिक खानेकुरा खान्छौ, त्यस्तो खानेकुराले हामीलाई तनावबाट निस्किन मद्धत गर्छ । यदि तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ भने प्रोटीन युक्त खानेकुरा, फल, तरकारी प्रशस्त मात्रामा सेवन गर्नुहोस् ।
राम्रो किताब पढ्नुहोस् ः तनाव हुँदा कुनै राम्रो किताब पढ्दा त्यसबाट बाहिर निस्किन मद्धत गर्छ । सफलता सँग सम्बन्धित किताब, जीवनी आदिले अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । यसले नकारात्मक सोच र तनावबाट बाहिर निस्किन मद्धत गर्छ ।
झुटो नबोल्नुहोस् ः झुटो बोल्नुको सम्बन्ध तनाव सँग पनि हुन्छ । जब हामी झुटो बोल्छौ, हाम्रो मनलाई थाहा हुन्छ कि हामीले गल्ती ग¥यौ । यसले गर्दा हामीमा अपराधबोध हुन्छ र हामी तनावमा पर्ने गर्छौ । त्यसैले हतपत झुटो बोल्नुबाट बच्नु पर्छ ।
अन्य उपायहरू ः
– केरा सेवन गर्दा यसले तनाव हटाउनुका साथै स्वस्थ रहन मद्धत गर्छ ।
– पोटाशियम एउटा मिनरल हो । यसले अक्सीजनलाई मस्तिष्क सम्म पु¥याउने काम गर्छ र मस्तिष्क तनाव रहित हुन्छ । त्यसैले पोटाशियम प्राप्त हुने खानेकुरा बढी मात्रामा सेवन गर्नुहोस् ।
– आफ्नो शौकहरु पूरा गर्नमा ध्यान दिदा पनि तनाव कम हुन्छ ।
– तनाव भएको बेला चिसो पानीले नुहाउनुहोस् ।
– मस्त निदाउनु तनाव हटाउने सबै भन्दा उपयुक्त तरिका हो ।
– दैनिक रूपमा योगा तथा ध्यान गरेर पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ ।
– हँसाउने कार्यक्रम वा हँसाउने व्यक्ति सँग समय बिताउदा पनि तनाव कम हुन्छ ।
– कहिलेकाँही कतै घुम्न जाने गर्नुपर्छ । यसबाट तनावबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ ।
– आफूलाई मनपर्ने गीत सुनेर पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ ।